2019 सब भन्दा लोकप्रिय पेप्टाइड Degarelix: प्रोस्टेट क्यान्सर को लागी एक औषधि
पेप्टाइड Degarelix पाउडर: प्रोस्टेट क्यान्सर को लागी एक वास्तविक औषधि
1। Degarelix के हो?
2। Degarelix पाउडर केको लागि प्रयोग गरिएको छ?
3। कार्यको Degarelix पाउडर संयन्त्र
4। Degarelix अन्तर्क्रिया
5। के त्यहाँ कुनै जोखिम छ यदि मैले Degarelix खुराक वा अधिक खुराक याद गरे?
6। कुन साइड इफेक्ट र चेतावनीले Degarelix कारण गर्न सक्दछ?
8। थप जानकारी
समकालीन, प्रोस्टेट क्यान्सर एक रोग हो जुन पुरुषको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई धम्की दिन्छ। प्रारम्भिक रोकथाम र उपचार यस रोगको उपचार गर्न आवश्यक छ। Degarelix पाउडर प्रोस्टेट क्यान्सरको उपचारको लागी एक प्रभावकारी औषधि हो, र हामीले यसको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी बुझ्न पहल गर्नुपर्दछ ताकि हामी यसलाई सही र सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछौं।
Degarelix (214766-78-6) एक हार्मोन थेरापी औषधी हो जसले शरीरमा टेस्टोस्टेरोन सहित हर्मोनको मात्रा कम गर्दछ। यो गोनाडोट्रोपिन-रिलीजिंग हार्मोन (GnRH) रिसेप्टर विरोधीको रूपमा चिनिने औषधीहरूको वर्ग अन्तर्गत वर्गीकृत गरिएको छ। यो सिंथेटिक पेप्टाइड व्युत्पन्न औषधि यसको ब्रान्ड नाम "Firmagon" द्वारा चिनिन्छ। निम्नलिखित यसको विशिष्टताहरू हुन्:
औषधि वर्ग: GnRH एनालग; GnRH विरोधी; एन्टिगोनाडोट्रोपिन
रासायनिक फार्मुला: C82H103ClN18O16
मोलर मास: 1630.75 g / mol g · mol − 1
जैव उपलब्धता: 30-40%
प्रशासनका मार्गहरू: तलको इंजेक्शन
उत्सर्जन: मल (70-80%), मूत्र (20-30%)
आधा जीवन हटाउने: 23-61 दिनहरू
2. Degarelix पाउडर केको लागि प्रयोग गरिएको छ?
Degarelix पाउडर उन्नत प्रोस्टेट क्यान्सरको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। एफडीएले एक्सएनयूएमएक्समा अमेरिकी बिरामीहरूमा उन्नत प्रोस्टेट क्यान्सरको उपचारको लागि औषधि स्वीकृत गर्योth डिसेम्बर, 2008। 17 माth फेब्रुअरी, एक्सएनयूएमएक्स, यूरोपीयन आयोगले पछिल्लो प्रोस्टेट क्यान्सर भएका वयस्क पुरुष बिरामीहरूमा प्रयोगको लागि डेगरेलिक्स औषधिलाई अनुगमन गर्‍यो।
कि नोट Degarelix इंजेक्शन एक चिकित्सा सुविधामा डाक्टर वा नर्स द्वारा प्रशासित हुनु पर्छ। Degarelix अन्य प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि, स्विडेनमा, यो औषधि यौन अपराधीहरूमाथि ईन्जेक्ट गर्न रासायनिक कास्ट्रेसन एजेन्टको रूपमा प्रयोगको लागि अध्ययन गरिन्छ। Degarelix स्तन क्यान्सर उपचार पुरुषमा स्तन क्यान्सर को एक वैकल्पिक उपचार को रूप मा पनि मानिँदै छ।
तपाईको डाक्टरले अरु औषधिहरुमा यो औषधि सिफारिस गर्न सक्छ। यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न कि किन तपाईं यो औषधि लिइरहनुभएको छ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्। अन्य औषधिहरू जस्तै, तपाईंले Degarelix अरू कसैलाई दिनु हुँदैन, यदि उनीहरूसँग उस्तै लक्षणहरू छन् भने। यो किनभने डाक्टरको भन्नु बिना नै यदि औषधि हानिकारक हुन सक्छ।
(1) Degarelix लिनु अघि तपाईलाई थप केहि पनि थाहा हुनुपर्दछ
निम्नलिखित केहि महत्वपूर्ण चीजहरू थाहा पाउनका लागि यो औषधि लिनु अघि:
Degarelix पुरुष बांझपन को कारण हुन सक्छ। यदि तपाईं भविष्यमा बुबा बन्न उत्सुक हुनुहुन्छ भने, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्। तपाईले उपचार सुरू गर्नु अघि शुक्राणु भण्डारण गर्ने बारे विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
यो औषधि महिला द्वारा प्रयोगको लागि अनुमोदित छैन। गर्भवती महिलाहरूले यो औषधि प्रयोग गर्नु हुँदैन। यो किनभने ड्रग्सले भ्रुणलाई हानी गर्न सक्दछ। स्तनपान गराउने महिलाहरू वा बच्चा जन्माउने इच्छा राख्नेहरूले पनि यो औषधि प्रयोग गर्नबाट अलग रहनु पर्छ। वास्तवमा, महिलाहरूले सामान्यतया Degarelix प्रयोग गर्नुहुन्न।
Degarelix लिन सुरक्षित छैन यदि तपाईंसँग अन्तर्निहित स्वास्थ्य अवस्था छ भने। निश्चित गर्नुहोस् कि यदि तपाइँसँग लामो QT सिन्ड्रोम छ, जो एक दुर्लभ हृदय समस्या हो कि बेहोश, अनियमित मुटुको धड्कन, वा अचानक मृत्युको कारण हुन सक्छ भने आफ्नो डाक्टरलाई सूचित गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई मुटु, मिर्गौला, वा कलेजो रोग छ भने तपाईले आफ्नो चिकित्सकलाई पनि सुचित गर्नु पर्छ। तपाईको डाक्टरलाई भन्नुहोस् यदि तपाईको रगतमा सोडियम, म्याग्नेशियम, पोटेशियम, वा क्याल्सियमको उच्च वा कम छ भने।
तपाईको फार्मासिष्ट वा डाक्टरलाई भन्नु यो पनि महत्वपूर्ण छ कि यदि तपाईलाई केहि औषधी वा अवयवहरुबाट एलर्जी छ। यसले तिनीहरूलाई जान्न मद्दत गर्दछ यदि तपाईं Degarelix इंजेक्शनमा एलर्जी हुनुहुन्छ।
(2) Degarelix इंजेक्शन खुराक
Degarelix दुई रूप मा आउँछ:
120 मिलीग्राम शीशी: प्रत्येक एकल प्रयोगको शीशीले Degarelix एसीटेटको रूपमा 120 मिलीग्राम Degarelix पाउडर समावेश गर्दछ।
80 मिलीग्राम वायल: प्रत्येक एकल प्रयोगको शीशीले 80 मिलीग्रामको हुन्छ Degarelix पाउडर Degarelix एसीटेट को रूपमा।
Degarelix पाउडर रूपमा आउँछ, तरल मिसिनु पर्छ र पेट को क्षेत्र मा छाला अन्तर्गत इंजेक्शन, कहीं पसल र कम्मर बीच। तपाईंले पहिलो पटक यो औषधि प्राप्त गर्दा, तपाईंलाई दुई Degarelix ईन्जेक्सन दिइनेछ। प्रारम्भिक Degarelix इंजेक्शन खुराक पछि, तपाइँ तपाइँको मासिक अनुगमन भ्रमणको समयमा एक मात्र इन्जेक्शन प्राप्त गर्नुहुनेछ।
प्रारम्भिक खुराक सामान्यतया Degarelix 240 मिलीग्राम2मिलीग्राम / एमएलको एकाग्रतामा Degarelix 120 मिलीग्राम प्रत्येकको 40 subcutaneous इंजेक्शनको रूपमा प्रशासित गरिन्छ। प्रारम्भिक खुराक पछि, तपाइँ 80 मिलीग्राम / एमएल प्रत्येक 20 दिनमा एकाग्रतामा 28 मिलीग्रामको मात्र एउटा subcutaneous इंजेक्शन प्राप्त गर्नुहुनेछ।
Degarelix ईन्जेक्शन प्राप्त गर्न जाँदा, तपाइँ पेटको छेउमा कडा कपडा, कम्मरमा वा बेल्ट लगाउनबाट जोगिनु पर्छ जहाँ इंजेक्शन दिइनेछ। तपाईंले डेगरेलिक्स ईन्जेक्शन प्राप्त गरिसकेपछि, यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको कमरब्यान्ड वा बेल्टले इन्जेक्शन क्षेत्रमा दबाब नदिनुहोस्। तपाईंले ड्रग ईन्जेक्सन गरिएको ठाउँमा खसाल्ने वा खोल्दा पनि जोगिनु पर्छ।
टेस्टोस्टेरोनमा निर्भर रहेको प्रोस्टेट क्यान्सरका लक्षणहरूको उपचारको लागि लगातार हर्मोन सप्रेससनको आवश्यक पर्दछ। यसलाई प्राप्त गर्न, यो अत्यावश्यक छ कि Degarelix एसीटेट डाक्टरले सिफारिस गरेको जस्तै ठीक प्रशासित गर्नुपर्दछ।
यो सुनिश्चित गर्न कि Degarelix औषधिले तपाईको अवस्थालाई मद्दत गरिरहेको छ, तपाईले नियमित आधारमा रक्त परीक्षण गर्नुपर्नेछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको डाक्टरसँग तपाइँको सबै फॉलो-अप अपोइन्टमेन्ट राख्नुहुनेछ।
तपाईंले यो पनि याद गर्नुपर्दछ कि Degarelix इंजेक्शनले केही मेडिकल टेस्टहरूको नतिजामा असर गर्न सक्छ। एकचोटि तपाईं यस औषधीको अन्तर्गत हुनुहुन्छ भने, आफ्नो डाक्टरलाई यो कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले यो औषधि प्राप्त गर्नुभएको छ जब त्यसपछिको मेडिकल टेस्टहरू लिनुहुँदा।
3. कार्यको Degarelix पाउडर संयन्त्र
पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोनले प्रोस्टेटमा क्यान्सर कोषहरूको बृद्धिलाई भनिन्छ। टेस्टोस्टेरोन उत्पादन गर्न टेस्टलाई रोक्ने औषधिहरू प्रोस्टेटमा क्यान्सर कोषहरूको बृद्धिलाई ढिलो र रोक्नका लागि परिचित छन्। त्यस्ता औषधिहरू पनि छन् जसले क्यान्सर कोषहरूमा पुरुष हार्मोनको आपूर्ति काटेर टेस्टोस्टेरोनको कार्य रोक्दछन्।
Degarelix पाउडर (214766-78-6) शरीरबाट स्वाभाविक रूपमा उत्पादन गरिएको टेस्टोस्टेरोनको मात्रा घटाएर कार्य गर्दछ। यो मस्तिष्कमा पिट्युटरी ग्रंथिमा GnRH रिसेप्टर्स अवरुद्ध गरेर गर्छ। यसले लुइटाइनिजिंग हार्मोनको उत्पादनलाई रोक्छ, यसले टेस्टोस्टेरोन उत्पादन गर्नबाट टेस्टलाई रोक्छ।
4. Degarelix अन्तर्क्रिया
अन्य क्यान्सर औषधिहरू जस्तै, Degarelix अन्य औषधिहरू र जडिबुटी उत्पादनहरू अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन्। निम्नलिखित ड्रगहरू का केहि प्रकारहरू छन् जुन अन्तर्क्रियाको कारण हुन सक्छ जब सँगै Degarelix सँगै प्रयोग गरियो:
निश्चित प्रोटीन kinase अवरोधकर्ताहरू
छनौट सेरोटोनिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ताहरू
Disopyramide, अरूलाई बीचमा।
जब डेगरेलिक्स सँगसँगै प्रयोग गरिन्छ, केहि औषधिहरूले एक प्रकारको असामान्य हृदय तालको जोखिम बढाउन सक्छ जसलाई क्यूटी लामोनीकरण भनिन्छ। तपाईं यो गम्भीर अवस्था र यसको जटिलताको लागि बढेको जोखिममा हुनुहुन्छ भने यदि तपाईं:
वरिष्ठ छन् (65 वर्ष र अधिक)
असामान्य हृदय ताल वा हृदय रोग को एक पारिवारिक इतिहास छ
अचानक हृदय मृत्युको एक इतिहास छ
सुस्त नाडी वा मुटुको दर छ
QT अंतराल को जन्मजात लम्बाइ छ
स्ट्रोक भएको छ
कम क्याल्शियम, म्याग्नेशियम, वा पोटासियम स्तरहरू छन्
यदि तपाईंसँग माथिका कुनै शर्तहरू छन्, वा कुनै स्वास्थ्य अवस्था व्यवस्थापन गर्न केहि औषधीहरू लिईरहनुभएको छ भने, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले डेगरेलिक्स औषधि प्रयोग गर्नु अघि आफ्नो डाक्टरलाई भन्नु पर्दछ। तपाईको फार्मासिष्ट वा डाक्टरलाई प्रिस्क्रिप्शन, ओभर-द-काउन्टर औषधी, पौष्टिक पूरक, हर्बल उत्पादन र भिटामिनहरू जुन तपाइँ लिइरहनु भएको छ वा लिनु भएको छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी गराउन निश्चित गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई औषधीहरूबाट रोक्न मद्दत गर्दछ जुन Degarelix अन्तर्क्रियाको कारण हुन सक्छ।
तपाईको चिकित्सकसँग तपाईको मेडिकल अवस्था र औषधीको बारेमा छलफल गर्नु महत्वपूर्ण छ किनकि तपाईले धेरै कारणका लागि लिनु भएको छ। सर्वप्रथम, यसले डाक्टरलाई तपाईसँग छलफल गर्न मद्दत गर्दछ कि कसरी अन्य औषधीको साथ यो औषधि प्रयोग गरी तपाईको मेडिकल अवस्थालाई असर गर्न सक्छ। तपाईको चिकित्सकले तपाईलाई जानकारी दिन्छ कि तपाईको मेडिकल अवस्थाले खुराकलाई कसरी असर गर्न सक्छ, साथ साथै Degarelix को प्रभावकारिता पनि। तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई कुनै पनि विशेष अनुगमन आवश्यक छ कि छैन सूचित पनि गर्नेछ।
5. के त्यहाँ कुनै जोखिम छ यदि मैले Degarelix खुराक वा अधिक खुराक याद गरे?
त्यहाँ Degarelix मा हराइरहेको वा overoding संग सम्बन्धित जोखिम संग कुनै नैदानिक ​​अनुभव छैन। जे होस्, तपाइँले तपाइँको डाक्टर संग परामर्श बिना यो औषधी सेवन रोक्न हुँदैन। यदि तपाइँ तपाइँको Degarelix इंजेक्शन को लागी एक भेट गुमाउनुहुन्छ, निर्देशन को लागी तपाइँको डाक्टर लाई कल गर्नुहोस्।
देखि Degarelix एसीटेट एक डाक्टर द्वारा प्रशासित हुनु पर्छ, यो धेरै दुर्लभ हो कि एक अधिक मात्रा हुन सक्छ। एक Degarelix अधिक मात्रा को घटना मा, तथापि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं आफ्नो विष नियन्त्रण केन्द्र कल गर्न वा तुरून्त चिकित्सा सेवा खोज्नु पर्छ। तपाईले लिनु भएको कुरा, वा तपाईले यो लिनु भन्दा कस्ता बनाउनु भयो र देखाउन तयार हुनुहोस्।
6. कुन साइड इफेक्ट र चेतावनीले Degarelix कारण गर्न सक्दछ?
धेरै अन्य औषधीहरूको रूपमा, Degarelix विभिन्न साइड इफेक्ट पैदा गर्न सक्छ। Degarelix साइड इफेक्ट हल्का वा गम्भीर हुन सक्छ, र ती पनि अस्थायी वा स्थायी हुन सक्छ। निम्न सामान्य छन् Degarelix साइड इफेक्ट, जो धेरैले यो औषधि लिने सबैजनाबाट अनुभव गर्न पाउँदैनन्:
अंडकोषको आकार घटाइयो
बारम्बार पिसाब गर्न आवश्यक वृद्धि
इंजेक्शन साइटमा छालाको प्रतिक्रिया, जस्तै पीडा, रातोपन, कठोरता, सूजन
यद्यपि माथिका अधिकांश डेजेरिलिक्स साइड इफेक्टहरू गम्भीर छैनन्, तिनीहरू गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्दछन् यदि तिनीहरू लामो समयसम्म रहिरहे भने। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले निम्न दुर्लभ, तर गम्भीर दुष्प्रभावहरू देख्नुभयो भने तपाईं चिकित्सा सहयोग लिनुहुन्छ।
हड्डी भाँचिएको वा दुखाइ
छाती असुविधा र सूजन
फ्लू जस्तो लक्षणहरू, जस्तै खोकी, ज्वरो, सुस्ती, र घाँटी दुखाइ
रगत कोलेस्ट्रोलमा स्पाइक
रक्तचाप मा स्पाइक
किनकि डेगरेलिक्सले टेस्टोस्टेरोन उत्पादन घटाउँछ, यसले रातो रक्त कोशिकाको कम स्तर निम्त्याउन सक्छ, यस्तो अवस्थालाई एनीमिया भनिन्छ। एनीमियाका लक्षणहरूमा चक्कर आउने, फिक्का छाला, असामान्य थकान र / वा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, तपाईले आफ्नो चिकित्सकलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंको रगतमा रातो रक्त कोशिका संख्या निरीक्षण गर्न तपाईंको डाक्टरले समय-समयमा रक्त परीक्षणहरू गर्नेछ।
Degarelix पनि मधुमेह को जोखिम वृद्धि गर्न भनिन्छ। यदि तपाईं मधुमेह रोगी हुनुहुन्छ भने, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं आफ्नो रगतमा चिनीको स्तर निगरानीको लागि नियमित परीक्षणहरू गर्नुहुन्छ।
Degarelix पनि अस्टियोपोरोसिस को जोखिम बढाउन भनिन्छ। यसले हड्डी पातलो हुन र अधिक सजीलो भाँच्न सक्छ। यदि तपाईंसँग पहिले नै अस्टियोपोरोसिस छ भने, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले आफ्नो डाक्टरलाई सूचित गर्नुहोस् ताकि यो निर्धारण गर्न सकिन्छ कि कसरी तपाईंको स्वास्थ्य अवस्थाले डेगरेलिक्स डोजिंगलाई असर गर्न सक्छ।
केहि बिरामीहरूले Degarelix साइड इफेक्ट अनुभव गर्न सक्दछ माथिको सूचीबद्ध भन्दा बाहेक। यदि तपाईं कुनै पनि लक्षण अनुभव गर्नुहुन्छ जसले तपाईंलाई असहज बनाउँछ वा तपाईंलाई चिन्तित बनाउँछ भने, ढिलो नगरी तपाईको डाक्टरलाई भेट्नु उत्तम हुन्छ।
तपाईको डाक्टरले तपाईलाई Degarelix ईन्जेक्शन लिन रोक्न सल्लाह दिन सक्छ यदि तपाईलाई मुटुको अट्याकको लक्षण देखा पर्दछ। यी लक्षणहरूमा अचानक छाती दुखाई, तपाईंको पछाडि सारिरहेको पीडा, दबाव वा छातीको जकडापन, गम्भीर मतली, बान्ता, पसिना, र / वा चिन्ताको सनसनी हुन सक्छ।
तपाईको डाक्टरले तपाईलाई Degarelix को उपयोग गर्न रोक्न सल्लाह दिईन्छ यदि तपाईले गम्भीर एलर्जीको लक्षण देखा पर्‍यो। यी लक्षणहरूमा एio्गियोएडेमा हुन सक्छ, जुन अ h्गा, सास फेर्न कठिनाई, र अनुहार, मुख, हात र / वा खुट्टाको सूजन द्वारा विशेषता हो।
त्यहाँ विभिन्न छन् Degarelix चेतावनी दिमागमा राख्न। ती मध्ये एक हो कि यो औषधि शरीरको तरल पदार्थहरू (बान्ता, मूत्र, पसिना, मल) को माध्यमबाट जान सक्छ। त्यसकारण, तपाईले आफ्नो शरीरको तरल पदार्थ तपाईको हातले वा अन्य व्यक्तिको छाला र अन्य सर्फरहरूसँग सम्पर्कमा आउन अनुमति नदिनुपर्दछ कमसेकम 48 घण्टा सम्म Degarelix इंजेक्शन प्राप्त गरे पछि।
हेरचाह गर्नेहरूलाई बिरामीको शरीरको तरल पदार्थ सफा गर्ने बेला र दूषित लुन्ड्री वा डायपरहरू सम्बोधन गर्दा सुरक्षात्मक रबरको पन्जा लगाउने सल्लाह दिइन्छ। धुलोयुक्त लुगा र कपडाको कपडा पनि अन्य कपडाबाट धुनु पर्छ।
चिन्ताको लागि त्यहाँ केहि Degarelix साइड इफेक्टहरू छन्, त्यहाँ केहि Degarelix लाभहरू यो औषधी प्रयोग गर्दा अगाडि हेर्न को लागी। क्लिनिकल अध्ययनहरूमा, यो प्रदर्शन गरिएको छ कि डेगरेलिक्स ईन्जेक्सनले अन्य संम्भावनात्मक हार्मोनल थेरापी उपचारहरू भन्दा टेस्टोस्टेरोनको स्तरमा छिटो कटौती प्रस्ताव गर्दछ। यस औषधीले सामान्यतया प्रारम्भिक टेस्टोस्टेरोनको कारण गराउँदैन जसले सम्भावित रूपमा लक्षणहरूको अस्थायी बिग्रेको कारण गर्दछ।
अर्को डेगारेलिक्स फाइदा भनेको औषधि सामान्यतया राम्रोसँग सहन सकिन्छ, अपवाद बाहेक एउटा अध्ययनले पत्ता लगायो कि इंजेक्शन-साइट प्रतिक्रियाहरू 40 प्रतिशत पूल गरिएको डेगारेलेक्स ग्रन्थ पदहरूको <एक्सएनयूएमएक्स प्रतिशत ल्युप्रोलाइड समूहको हुन्छ। यी प्रतिक्रियाहरू प्रायः हल्का वा मध्यम थिए, र तिनीहरू पहिलो इंजेक्शन पछि मुख्य रूपमा देखा पर्‍यो।
धेरै क्लिनिकल अध्ययनहरूबाट प्रारम्भिक डाटाले LHRH एगोनिस्टहरूको तुलनामा, Degarelix 1 भित्र पर्याप्त उच्च समग्र अस्तित्वसँग जोडिएको थियो भनेर संकेत गर्दछ।st उपचार को वर्ष यस उपचारको प्रयोग गर्दा प्रोस्टेट क्यान्सरको सफलतापूर्वक उपचार गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने तथ्य यो हो कि यस औषधिलाई प्रयास गर्नै पर्ने डगरेलिक्स लाभहरू मध्ये एक हो।
Degarelix र रक्सी
थोरै मात्रामा रक्सी सेवन गर्दा डिगरेक्सको उपयोगिता वा सुरक्षामा असर पार्दैन। जे होस्, तपाईं जहिले पनि यो औषधि लिईरहँदा उच्च मात्रामा मदिरा सेवन गर्नु हुँदैन।
यदि तपाईं वा प्रियजनलाई प्रोस्टेट क्यान्सर छ भने, Degarelix कीमोथेरापी निस्सन्देह तपाईले रोज्न सक्ने एक उत्तम उपचार विकल्प हो। तपाईं Degarelix जस्तै एक हार्मोनल थेरापी मा सर्जरी छनौट गर्न को लागी मात्र कल्पना गर्न को लागी खर्च हुनेछ। यद्यपि, कुनै पनि लागत भिन्नता डेगरलेक्स लाभहरू द्वारा ओझेलमा पर्नेछ।
8. थप जानकारी
तपाईं सायद Degarelix लागत को बारे मा सोचिरहनुभएको छ। Degarelix को साथ उपचार को औसत वार्षिक लागत लगभग $ 4,400 हो। यो उन्नत प्रोस्टेट क्यान्सरको लागि अन्य उपलब्ध हर्मोन उपचारहरूको लागतसँग अनुरूप छ। 80 मिलीग्राम इंजेक्शन को लागी Degarelix इंजेक्शन मूल्य इंजेक्शन को लागी एक पाउडर को आपूर्ति को लागी $ 519 को आसपास हो। लागत तपाईंले भ्रमण गरेको फार्मेसीमा पनि निर्भर गर्दछ।
तपाईं पनि भेट्न सक्नुहुन्छ “Degarelix अनलाइन किन्नुहोस्"विज्ञापन। अनलाइन ड्रग खरीद गर्दा तपाईले धेरै सतर्क हुनु पर्छ। यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ एक अनलाइन विक्रेताबाट औषधि अर्डर गर्नु अघि उचित पृष्ठभूमि जाँचहरू र उचित लगत गर्नुहुन्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि आपूर्तिकर्ता वा अनलाइन फार्मेसी कानूनी छ र उनीहरू के बेच्दैछन् जुन औषधिको कानुनी र शुद्ध रूप हो।
Degarelix कोठाको तापमानमा भण्डारण गरिनु पर्छ। यो औषधि लाई प्रकाश र चिस्यानबाट जोगाउन निश्चित गर्नुहोस्। अन्य औषधिहरू जस्तै, डेगरेलिक्सलाई बच्चाको पहुँचबाट टाढा राख्नुहोस्।
घरको फोहोर वा फोहोर पानीमा डेगरेलिक्स पाउडरको डिस्पोजल नगर्नुहोस्, जस्तै शौचालयमा वा सि s्क भित्र। तपाईंको डाक्टर वा फार्मासिष्टलाई सोध्नुहोस् कि कसरी औषधिहरू डिस्पोज गर्ने कि म्याद सकिएको छ वा प्रयोगमा छैन
भ्यान पप्पेल एच, टोंबल बी, एट अल (अक्टूबर 2008)। डेगारेक्सिक्स: एक उपन्यास गोनाडोट्रोपिन-रिलीजिंग हार्मोन (GnRH) रिसेप्टर ब्लकरaएक वर्ष, मल्टिसेन्ट्रे, अनियमित, चरण दुई खुराक पत्ता लगाउने परिणामबाट प्रोस्टेट क्यान्सरको उपचार। युरो। उरोल। 54: 805-13।
यु एस नेश्नल लाइब्रेरी मेडिसिन नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ, ब्रिटेनको उन्नत हार्मोन-निर्भर प्रोस्टेट क्यान्सरको उपचारमा डिगेलिक्सको मूल्य-उपयोगिता विश्लेषण, ली डीएक्सएनयूएमएक्स, पोर्टर जे, ब्रेरेटन एन, नीलसन एसके, एक्सएनयूएमएक्स अप्रिल; एक्सएनयूएमएक्स (एक्सएनयूएमएक्स ): 1-2014।
गिटेलम्यान एम, पोमरभिल पीजे, पर्सन बीई, एट अल (एक्सएनयूएमएक्स)। एक एक्सएनयूएमएक्स-वर्ष, खुला लेबल, अनियमित चरण दोस्रो खुराक उत्तरी अमेरिकामा प्रोस्टेट क्यान्सरको उपचारको लागि डिगारेलेक्सको अध्ययन फेला पार्दै। जे उरोल। 2008: 1-180।
Semax का शीर्ष7लाभहरू तपाईले प्रयोग गर्नु अघि जान्नु पर्दछ
Liraglutide: मधुमेह mellitus प्रकार2र मोटाई को उपचार को लागी एक राम्रो औषधि